Markale Ayaa Disha Patani Laga Kaaftoomaya, Sara Ali Khan Ayaana Lagu Badalayaa Disha Patani Filimka ‘Student Of The Year 2’ - Hablaha Media Network
Markale Ayaa Disha Patani Laga Kaaftoomaya, Sara Ali Khan Ayaana Lagu Badalayaa Disha Patani Filimka ‘Student Of The Year 2’
HMN:- Warar hore aya waxay sheegayan atariisha filimka ‘M.S. Dhoni’ (The Untold Story) Disha Patani inay soo gaba gabeysay saxiixa mashruuca uu Karan Johar iskaleeyahy ee ‘Student Of The Year 2’.
Sikastee ahataba, markii loo fiiriyo ilaha xaqiiqo ee warkani wuxu sheegaya gabadha ay iska dhaleen labada jilaa ee caanka ah Saif Ali Khan iyo Amrita Singh gabadhoda lagu magacabo Sara Ali Khan aya lagu badalay booski Disha wuxuna noqon doona filimki ugu horeyay ee atarisho ka noqoto Sara iyado waliba atarisho unoqon doonto Tiger shroff oo filimkan atoore ka ah.
Marka loo fiiriyo gudaha bollywood-town waxay sheegayan, “ in Dsha ayba mashrucan so gabagabeysay siduu marki horeba tiger udoonayey in atarisho ay u noqoto asiga filimkan. Taasi micnahedu waxay tahy in labadan jilaa ay shaashada kuwadagi lahayeen shukaansi heersare ah iyo jaceyl taaso daawadayaashuna xiisenayan.
Filimsameye Karan Johar iyo director Punit aya isku raacay disha in filimkan iyada atarisho ka noqoto, maadama ay tahay qof faraxsan oona firfircoon kalsoonina ku muujinesa shaashada sida horey loga arkayba filimki M.S. Dhoni: The Untold Story’ iyo waliba filimka Jackie chan ay lawaday ee ‘kung fu yoga.’
Bale sababa jiro aawged oo loo badiyay filimsameyasha disha aya laga badalay filimkani. Maadama karan johar uu qorsheenayey marwalba sidu Sara u caasumo ogana hadlo arimahaas, inkasto markihore larabay inay iyada iyo wiilka Shahid Kapoor ladhashtay ee lagu magacabo Ishaan Khattar. Lakin taas weysuurowi weyday.
Karan waa nin xogtiisa filimda uqarsoonyihiin wuxuna jecelyahy in uu isaga nafsad ahaantisa magacaabo jilayasha filimada.
Waa marki labaad oo atarishadan Disha laga saarayo mashruuc ay lawado isla hal atoore oo ah Tiger Shroff marki hore wuxuu ahaa Baaghi oo lagu badalay Shrada Kapoor.
Filimka ‘Student Of The Year 2’ goaankisa saxda ah, xiliga duubis lagu bilawaayo iyo jilayasha dhameestiran waxa la sheegi doona bisha April.
F.G: Warbixintaan Waxaa Nala Wadaagay Soona Turjumay Aqriste Ali Aadan Hassan